किन भित्रिँदैन विदेशी लगानी ? | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण किन भित्रिँदैन विदेशी लगानी ?
on: June 19, 2019 लेख | दृष्टिकोण
लगानी सम्मेलनमा करीब १४ खर्ब लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । लगानीको प्रतिबद्धता जति नै आए पनि त्यस अनुसार नेपलमा लगानी भित्रिहाल्दैन । चाहे त्यो भूकम्पका बेलामा गर्ने भनिएको सहयोग होस्, चाहे विगतका लगानी सम्मेलनकै कुरा होस्, प्रतिबद्धताभन्दा निकै न्यून रकम मात्र भित्रने गरेको छ । लगानी सम्मेलन गर्नु मात्र उपलब्धि होइन । चीन, भारत मात्र नभएर बंगलादेश, जापान, बेलायत, श्रीलंका, मलेशिया जस्ता मुलुकबाट लगानी प्रतिबद्धता आए पनि त्यसलाई यथार्थमा परिवर्तन गर्न नेपालले निकै काम गर्न बाँकी देखिन्छ ।
सरकारले वैदेशिक लगानीका लागि छिटोछरितो सुविधा दिने भने पनि नेपालमा वैदेशिक लगानीकर्ता आएर व्यवसाय गर्न खोज्छ भने उसले कम्तीमा ३५ दिन लाग्ने झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्छ । हालै एकद्वार प्रणाली लागू भएको छ । यसले यो समस्या केही कम कम गर्ने आशा त गर्न सकिन्छ । तर, सरकारी कर्मचारीको स्वभाव हेर्दा लगानीकर्ताले सहज अनुभव गर्लान् भन्न सक्ने स्थिति छैन । डुइङ बिजनेश इन नेपालमा नेपालको स्थान निकै माथि छैन । धेरै लगानीकर्ताले यसलाई पनि लगानीको आधार मान्छन् । तर, यो सूचकका आधारमा पक्कै पनि नेपाल आकर्षक लगानी गन्तव्य मान्न विदेशी लगानीकर्तालाई गाह्रो भएको हुनुपर्छ । लगानीमैत्री मुलुकहरूमा विदेशी लगानीकर्ताले सहज रूपमा छिट्टै आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउँछ । कानूनी र प्रशासकीय अड्चन खासै हुँदैन । तर, नेपालमा भने कागजी प्रक्रिया मिलाउनै महीना दिनभन्दा बढी लाग्छ । अझ लगानीकर्ताबाट पैसा झार्न सकिन्छ भन्ने सोच भएका कर्मचारी पनि छन् । लगानी आफैमा जोखिमयुक्त कार्य हो । त्यसैले विदेशी लगानीकर्ता लगानीको सुरक्षा र धेरै कानूनी कुराको सुनिश्चितता खोज्छन् । स्थानीय लगानीकर्ताले लगानी गर्ने हो भने र उनीहरूसँग हातेमालो गर्न पाउने हो भने विदेशी लगानीकर्ता विश्वस्त बन्न सक्थे । नेपालका उद्यमीहरू नै आफू लगानी गर्दैनन् अनि विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ भन्छन् । नेपालकै व्यवसायीले लगानी नगरेपछि विदेशीहरूले पक्कै पनि यहाँ समस्या छ भनेर अड्कल काट्नु कुनै ठूलो कुरा भएन । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा काम गर्दा निजीक्षेत्र बढी लाभान्वित हुन सक्छ । त्यसैले यो मोडललाई सरकारले प्राथमिकता दिनु राम्रो हुन्छ । यही मोडलमा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन पनि सक्छन् ।
लगानीको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने एक मात्र विकल्प बिप्पा हो । बिप्पालाई सार्थकता प्रदान गर्न सरकारले सम्पूर्ण नीतिगत व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ । विगतमा जस्तो बिप्पा गर्दा नकारात्मक टिप्पणी फेरि नआउला भन्न सकिँदैन । बिप्पा राष्ट्रघाती सम्झौता नभएर लगानी ल्याउन आवश्यक छ भनेर सबैले बुझ्नुपर्छ । लगानी नभित्रनुको अर्को कारण कर प्रणाली पनि हो । नेपालको कर प्रशासन निकै जटिल खालको छ । त्यसमा पनि कर लाग्ने र नलाग्ने विषयमा नै पनि विवाद हुने गरेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को अवधारणा ल्याइए पनि अझै यो राम्ररी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नयाँ प्रविधि, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने उद्योग, रोजगार प्रदान गर्ने उद्योगहरूलाई विशेष कर छूटको व्यवस्था गर्दा पनि लगानी आकर्षित हुन सक्छ । तर, कर छूट मात्रै सबै थोक भने होइन ।
विदेशी लगानी भित्र्याउन हामीले अन्य देशले केके गरेका छन् भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि खाडी मुलुकलाई लिन सकिन्छ । त्यहाँ कमाइएको नाफा फिर्ता लिएर जान पाइने प्रावधान अत्यन्त सरल छ । नाफा र लगानी फिर्ता लैजाने नीति स्पष्ट हुँदा लगानी आउन सक्छ र मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्छ । नेपालमा विदेशी लगानीकर्ता आए भने उनीहरूलाई लुट्न आएको भन्ने दृष्टिले हेरिन्छ । व्यवसास गरेर स्वच्च रूपमा मुनाफा कमाउँदा पनि अनेक आरोप लगाइन्छ, आशंका गरिन्छ ।
नेपालमा लगानी गर्ने एउटा राम्रो समूह गैरआवासीय नेपालीहरू हुन सक्छन् । उनीहरूको लगानी सुनिश्चित गर्न राज्यले सक्नुपर्छ । नेपालबाट टाढा रहे तापनि नाफा र ममता दुवैको नाता रहने यस समूहले नेपालको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन लाभ प्रदान गर्छ । दर्ता गर्ने प्रक्रियादेखि कर लगायत विषय केकति सकिन्छ, विशेष प्रावधान मिलाएर उनीहरूलाई सहुलियत दिएर लगानी आकर्षित गर्न उपयुक्त हुन्छ । एकद्वार प्रणाली शुरू त भएको छ तर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन ।
संविधान निर्माणपछि नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले आआप्mनो प्राथमिकता के हो भनेर पहिचान गर्न थालिसकेका छन् । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत बनिसकेको छ । उनीहरूले वैदेशिक लगानीलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । पर्यटन, कृषि, जलविद्युत् जस्ता प्राथमिकता तोकेर लगानी गर्न आ≈वान मात्र गरेका छैनन् कर छूट लगायत प्रस्ताव समेत सार्वजनिक गरेका छन् । सरकारले रेलमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यदि कुनै विदेशी लगानीकर्ता आएर कुनै रेल परियोजनामा लगानी गर्ने इच्छा देखाउँछ भने कर, दर्ता, जग्गा प्राप्ति जस्ता विविध पक्षमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहयोग र सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । तर, अहिले भाषणमा यसो भनिए पनि व्यवहार भने त्यस्तो पाइँदैन ।
नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानूनमा स्पष्टता नभएकाले लगानीकर्ता हच्किएछन् । पेटेन्ट चोरीका थुप्रै मुद्दा परेका छन् । यस्तोमा लगानीकर्तालाई आप्mनो सृजना चोरी हुने भय हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानून बनाई पेटेन्ट सम्बन्धी विवादलाई समाधान गर्नुपर्छ ।
किन वैदेशिक लगानी आएन भन्ने कुरा नीतिनिर्माता, राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासन संयन्त्रलाई राम्ररी थाहा छ । उनीहरू व्यावहारिक समाधान खोज्नुभन्दा शब्दजालमा रमाउँछन् र मीठा अभिव्यक्ति दिन्छन् । तर, कार्यान्वयनका जटिलता फुकाउनभन्दा घुमाएर झनै जटिल बनाउनतिर लाग्छन् । वास्तवमा विकासका भिजन र अठोट नभएकाले यो समस्या बढी देखिएको हो भन्न सकिन्छ । अठोट र विचारपूर्ण दृष्टि भएको व्यक्तिले विकासको नेतृत्व नलिएसम्म वैदेशिक लगानीका माध्यमबाट समृद्धि प्राप्त गर्ने हाम्रो सपना अधुरै रहनेछ ।
‘विदेशी लगानी भित्रिन नसक्नु चुनौती’